Fumanisa ngaphezulu kwama-2500 emithombo yasimahla yabayili | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJose Angel | | ngokubanzi, Izibonelelo, Tutorials
Nanini na xa sithetha ngeebhulashi, sithetha ngomhlaba okhululekileyo. Zininzi oya kuba nazo kwifoto yakho yefoto ngeendlela ezahlukeneyo kwaye, xa ungena kwi-intanethi, ufumana ezininzi ongenazo. Sitshilo ama-2500 kwaye kuvakala ngokungafikeleli. Ngokuqinisekileyo ukhubeka kwenye obusele unayo, kodwa phakathi kwazo zonke, zingaphi ezingakhange zenze njalo?
Ewe, la mawaka mabini anamakhulu mahlanu, eza elungiselelwe ngokwamanqanaba ahlukeneyo. Oku kuyakwenza lula kuwe ukufumana uhlobo lwebrashi oyifunayo. Ukusuka kwiimpawu ukuya kwimixube, kuthungelwano lwentlalo. Kwaye njengokuba usazi kakuhle, ii-icon zenethiwekhi yokunxibelelana ziyatshintsha, apha unokuphanda ukuba zeziphi ezona zinto zinobuchule kunye nezinokwenzeka ngakumbi kwiwebhusayithi yakho.
1 Uyilo lwegraphic kunye nomzekeliso
2 Ezinye izixhobo: Izifundo
3 Izipho ze3D
Uyilo lwegraphic kunye nomzekeliso
Ukwenza nawuphi na umsebenzi uya kudinga izixhobo ezimbalwa. Kweli candelo siza kuveza amakhonkco ukuze ufumane yonke into oyifunayo. Okanye ngaphandle kokuyidinga, unokuxhamla kubo bonke. Ungaphuthelwa, amakhonkco aphume ngesitayile kwaye kuhlala kulungile ukuba neendawo zokugcina kwikhompyuter yakho.
Apha Iindidi ezingama-40 ezahlukeneyo zokwenza ngesisombululo esiphezulu simahla.
Nyusa ishishini lakho nge Iitemplate ezingama-21 zezi ncwadana.
Nangona ishishini ayisiyonto yakho, okanye eyakho ukwenza iikonsathi, zisebenzise Iindidi ezingama-20 zeflaya yeziganeko zakho.
Nangona iKrisimesi iphelile, nantsi Iiprojekthi ezili-10 Kunyaka olandelayo, azikaze ziye kwisitayile.
Fumana Iimpawu zezimvo zakho.
Ukuba ujonge ii icon ukudibanisa eyakho nomphakathi kwiwebhu, nantsi iindidi zayo. Nokuba uyabafuna kwiityhubhu zovavanyo!
Khuphela Iivenkile zasimahla ezingama-300 Inkampani yaseBasiliq, banobuchule kakhulu.
Imithombo njengezixhobo, ukuba zinokuphinda zibe kwifashoni kwakhona, nantsi unayo eyona Imithombo engama-56 malunga negrafiti. Okanye ezingama-48 Iifonti ezilungileyo malunga neetattoos.
Si buscas fondos de pantalla, 8 zinikwe ukukhuthaza ubuchule bakho, obuqinisekileyo ukuba buninzi.
Kwaye njengesiqheloUkugqiba ngezi zixhobo zibalaseleyo zokwenza i-creativebloq kunye nezinye iiwebhsayithi, unokukhuphela ukuya kuthi ga I-60 yeebhrashi ezingcono zamahhala kwikhonkco elingezantsi: Iibhulashi ezingama-60 zasimahla. Ndiyathemba ukuba uyayonwabela.
Ezinye izixhobo: Izifundo
Izixhobo azisoloko ziza ngohlobo lweebrashi, imibala, ii-icon okanye olunye uhlobo lwesixhobo esinokukhutshelwa Ifoto yakho yefoto. Ungazifumana zikwimo yevidiyo njengesifundo. Oku kuya kuthetha ukuba ukuba awunayo uqeqesho lwangaphambili, unokulufumana ngokulula ngonqakrazo olunye. Kuyinyani ukuba uninzi lweyona tutorials zibalaseleyo zichazwe ngesiNgesi kodwa kananjalo, nge-intuition encinci siyakwazi ukuqonda ukuba ichaza ntoni kwividiyo.
Enkosi kumaqonga anjengeYouTube, Vimeo ... Ukusebenzisana, ukukwazi ukuma kunye nokudlala, kwenza kube lula kuthi ukuba siqondane kwaye siqokelele nolwazi ngaphambi kokuba uye kwiziko kuphela. Kuyinyani ukuba oku akusoloko kulungile, kodwa, ukuba awungekhe uzuze ngenye indlela ngaphandle kokuya kwisiteshi, yenze. Kungcono ukwazi okuncinci kunokungahoyi kwaphela.
Kwaye nangona nanini na xa siqala kweli hlabathi sibhenela kwifotohop okokuqala, umzobi okanye ezinye iinkqubo ezinje ngefoto yokuthandana, zikwabaluleke kakhulu. Kuba basebenza ngendlela ye vector kwaye basinika inkululeko enkulu yokwenza ii-icon ukuqala, umzekelo. Nantsi unayo Iimfundiso ezili-100 ezimangalisayo malunga nombonisi. Ukusuka kwimizobo ye-retro ukuya kwii-logo.
Malunga ne-typography njengoko sibonile kwimithombo yangaphambili, zininzi iitutorials ukunika inkangeleko eyodwa. Ukuba yile nto ubuyikhangela kwasekuqaleni nakwifotoshop, nantsi uyaya. 5 izifundo ezinkulu yendlela yokuguqula ubuchwephesha ukuze bubukeke kwi-3D, ngombala wentsimbi okanye ngokudityaniswa komfanekiso.
Amaxesha amaninzi kufuneka sibonise into, ezinje ngoyilo olutsha lwempahla, engakhange ibonakale ilungile ngaphandle kokuba idityaniswe kwimodeli ye-3D. Apha unezilwanyana, i-mannequins kunye neepropu zokunxiba izimvo zakho. Iimodeli ezingama-29 zasimahla ze3D.
Kwaye ungakhathazeki xa ukhuphela ezi zoyilo. Ukuba awuyazi indlela yokudibanisa emva kwemizamo eliqela okanye awufuni ukwaphula intloko ube lixesha lakho lokuqala. Jonga ezi tutorials zokuqala kwaye uya kuba necebo elihle lokuba ungayenza njani.
Isifundo sabaqalayo. Okanye bathi isiteketiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Fumanisa ngaphezulu kwe-2500 yezixhobo zasimahla
izinto ezininzi zihlawulwe